Lacagta Turkiga oo hoos ku dhac weyn ku yimid iyo dhaqalaha Turkiga oo burbur ku socda - Muqdisho Online
Home News Lacagta Turkiga oo hoos ku dhac weyn ku yimid iyo dhaqalaha Turkiga...
Lacagta Turkiga oo hoos ku dhac weyn ku yimid iyo dhaqalaha Turkiga oo burbur ku socda
Waxaa maanta hoos u dhac weyn ku yimid lacagta Turkiga ee loo yaqaano LIRA. Waxa uu maanta kaliya hoos ugu dhacay in ka badan boqolkiiba shan iyo toban 15%. Hoos u dhacaan ayaa yimid ka dib markii maalmahii u danbeeysay uu xiriirka u dhaxeeya dowlada Maraykanka iyo kan Turkiga uu sii xumaanayay. Maanta ayaa dhowlaa Maraykanka waxaa ay ku soo rogay canshuur xad dhaaf badeecooyinka qaar oo ay dowladda Turkiga u dhoofiso dalka Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in cashar loo dhigi doono Dowladda Turkiga. Talaabadda lagu burburinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa u muuqda mid uu farahiisa ku raadsaday Madaxweyne Erdogan oo dagaal ku qaaday siyaasadda dalka Maraykanka.
Madaxweyne Erdogan oo maanta la hadlay shacabkiisa ayaa u sheegay in ay caloosha xirtaan una diyaar garoobaan dagaal dhaqaale. Erdogan waxa uu yiri “..Maraykanka waxa uu haystaa doolar, anagana waxaan haysanaa Ilaah”
Dagaalkaan dhaqaale ayaa waxaa ka danbeeya wadamada carabta qaar, sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dowladda Israaiil. Hadiiba Turkiga dhaqaalihiisa ciriiri la galiyay, Dowladda Soomaaliya oo horay isugu taagtay dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga maxaa ay filan kartaa?. Waxaan shaki ku jirin in qorshe xoog leh ku soo socdo Soomaaliya oo aan lahyn awood dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay isaga difaacdo.
Previous articleCabdi Farax Juxa ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in Dowladda Soomaaliya lagu qasbay Tageeradii Sacuudiga
Next articleGanacsatada Xoolaha ” …bal waa kaa ee Farmaajo xoolaheyna ha u diro Qatar”